Iitempile ezinde okanye ezimfutshane? Khangela ukuba zeziphi eziza kukufanela | Amadoda aQinisekileyo
Kuyamangalisa amandla ukuba into ebonakala ingabalulekanga njengokutshiswa kwamacala eecala xa isiza ekwenzeni ubuso bethu bube nomtsalane ngakumbi emehlweni abantu. Njengokuba kunjalo ngeenwele, obona bume buchukumisayo bemilenze kunye neyona nto intle kakhulu kufuneka iphawulwe ngokumila kobuso bethu, hayi ukuthanda kwethu, njengoko kuhlala kunjalo. Qala ngokuzijonga esipilini ngononophelo nangokufanelekileyo. Ngaba ucinga ukuba ubuso bakho bumde okweqanda okanye bude?
Khulisa ukutshisa kwecala de kube kugqithe embindini wendlebe ukuba ubuso bakho bume ngeqanda, NjengoNiall Horan. Oku kuyakunceda ukungqinelanisa imilo yobuso bakho, njengoko ixesha elide kukutshiswa kwamacala, kuya kuncipha ubuso bakho. Fumana ubude bakho obufanelekileyo phakathi embindini wendlebe kunye ne-lobe. Yehlisa ezantsi i-lobe, hayi, ngaphandle kokuba udubula umboniso bhanyabhanya okanye kwiqela le-rockabilly.
Amadoda anobuso obude kufuneka enze ukuba ukubola kwawo kube kufutshane ukuba ufuna ukwenza ubuso bakho bube mnandi ngakumbi emehlweni. Kwaye, mfutshane, zibanzi ubuso bakho. Kodwa khumbula, ungaze uyichebe yonke itempile, kuba oko kuya kubangela isiphumo esingaqhelekanga nesingathandekiyo. Khuphela u-Olly Alexander kwaye ushiye ubuncinci isiqingatha se-intshi. Yinto enye ukunxiba umhlana omfutshane kunye nenye into, ukungabinamacala.
Ukuba ucinga ukuba ubuso bakho buyangqinelana, oko kukuthi, abukho mbumbulu kakhulu okanye bude kakhulu, into yokuqala kukubulela abazali bakho ngokudlulisela olu lwazi lufanelekileyo kuwe. Ukuqhula ecaleni, siyacebisa ukuba ukhethe ubude obuqhelekileyo (isiqingatha seendlebe), i-millimeter phezulu, i-millimeter ezantsi, nangona kunjalo, abantu abanobuso obugqibeleleyo bathanda nasiphi na isitayile seebhedi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Luhlobo luni lweentsimbi ezisecaleni ezikwenza ube nomtsalane ngakumbi?
UVarela osondeleyo sitsho
Enkosi ngeengcebiso !! Ndiyabulisa
Phendula kuVarela osondeleyo
Ukuba likhoboka lamanyala kunye neziphumo zalo